Zvigadzirwa fekitori, vatengi
Welded kennels, iwe unogona zvakare kuidana seyawakachengeterwa waya kennels, yakasungwa waya imbwa kennels, yakasungwa waya imbwa kennel kits.
Welded waya kennel uye masisitimu ekuchengetedza akakura mukuzivikanwa nekuda kwechitarisiko chavo chemazuvano, sarudzo dzemavara, poda jasi kupedzisa, nyore kuiswa, uye mutengo unogadzira dhizaini. Modular dhizaini inobvumira inokurumidza uye yakapusa kumisikidza-kwakasiyana masisitimu. Kurumidza kuvaka kennel kune imwe imbwa, kana shandisa akawanda mapaneru kuvaka akawanda imbwa kennel inomhanya.
ISRAERI Y Fence POST
Iyo simbi y fence post, ivo vanogona kushandiswa kutsigira dzakasiyana siyana tambo kana waya mesh. Fenzi yeminda uye dzimba kune chengetedzo nedziviriro. Tsigiro mune zvekurima uye imba yemiriwo. Kunyanya. 1.75kgs / m 1.80kgs / m 1.85kgs / m 2.00kgs / m Kureba 1.5m-3.0m 1.5m-3.0m 1.5m-3.0m 1.5m-3.0m
Kudzivirira fenzi, inozivikanwawo seyando fenzi, epurasitiki chengetedzo fenzi, chengetedzo netting.
Iyo epurasitiki yekuchengetedza fenzi inoonekwa zvakanyanya uye yakanaka kune yekuvaka, nzvimbo dzemuchadenga, kudzora kwevanhu, basa remugwagwa, uye kunyangwe mabhishi. Iyi Fence yechando inogona kubvarura nzvimbo zvakare kubva kuRoadwork, kana kugadzira Mapasa, uye kunyangwe maRoti ekupaka.
Iyo yekuchengetedza fenzi inogadzirwa kubva Heavy Duty Polyethylene, (HDPE) saka inogona kubata kumusoro kune yakasimba mhepo, inovhenekera chando, uye kunyange jecha. Kazhinji, iyo yekuchengetedza fenzi ichave yeorenji ruvara, bhuruu ruvara, uye girini ruvara, sezvo inopenya ruvara ichaita kuti zvive nyore kuona kune vanhu vazhinji, uye vanoona. Inogadzikika zviri nyore kufamba uye kuchengetwa kure, uye kushandisa zvakare mukugadzirisa kwakasiyana.
Kwakakurudzira HEXAGONAL waya Mesh
Kwakakurudzira hexagonal waya pajira riya, tinogonawo kunzi kwakakurudzira hexagonal mambure, kwakakurudzira huku pajira riya, kwakakurudzira tsuro pajira riya kana kwakakurudzira yehuku pajira riya. Kuitwa neyakaderera kabhoni simbi waya, yakasarudzika yepamusoro kurapwa, senge kwakakurudzira, inopesana nekugadzirisa.
Kwakakurudzira cheni kubatana pajira riya inonziwo kwakakurudzira nedhaimani waya pajira riya kana kwakakurudzira rhombic waya pajira riya.
Iyo yakasunganidzwa waya mesh inogona kukamurwa kuita maviri marudzi, welded waya mesh rolls, uye welded waya mesh machira.
Mukati memhando dzakasiyana dzekupedzisa, inogona kuve yakakamurwa kuita mhando nhatu, yemagetsi kwakakurudzira simbi waya pajira riya, inopisa yakanyorova kwakakurudzira welded waya pajira riya, uye PVC yakavezwa welded waya pajira riya.
Kunze kwezvo, kupesana nenzira dzakasiyana dzekugadzirisa, pane magetsi akasonanidzwa pamberi pekutenderera, kupisa kwakanyudzwa kwakakurudzira kusati kwanyoroveswa, kupisa kwakanyudzwa kwakakurudzira mushure mekutenderera, uye PVC yakavharwa mushure mekudonha.
Nyore kuisa Painted kuchengetedza kubva kuora Unobtrusive girini ruvara rweyadhi uye mapindu